Ciidamadii iyo Taliyihii hogaaminayay weeraradii Afgooye,Balcad iyo Marka lagu qabtay oo Uganda lagu celiyay kuwa cusubna lagu soo badalay | Somalisan.com Home
Ciidamadii iyo Taliyihii hogaaminayay weeraradii Afgooye,Balcad iyo Marka lagu qabtay oo Uganda lagu celiyay kuwa cusubna lagu soo badalay
9/7/2012 6:52:00 PM
Waxaa Muqdisho dhawaan ka dhoofay ciidamo ku dhow 3000 askari oo u dhashaty Dalka Uganda iyo taliyihii hogaaminayay Brig. Paul Lokech
Waxaa Muqdisho dhawaan ka dhoofay ciidamo ku dhow 3000 askari oo u dhashaty Dalka Uganda iyo taliyihii hogaaminayay Brig. Paul Lokech kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen ciidamadii qabtay Balcad,Agooye iyo Marka iyadoo lagu soo badalay kuwo cusub. Taliyaha guud ee ciidamada Uganda Lt. Gen. Katumba Wamala ayaa saxaafada u sheegay in ciidamadaasi gaareen dalkooda Uganda islamarkaana ay muqdishana soo gaareen kuwo kale oo iyaga badal u ahaa si ay dagaalada socda uga qeybqaataan.
“ciidaamada la badalay waxaa guteen waajibaadkii markii hore loo keenay Soomaaliya”ayuu yiri Wamala Lt. Gen. Katumba
Ciidamada cusub ee Muqdisho soo gaaray waxaa gaarayaan 2,830 waxaana hogaaminaya Brig. Micheal Ondoga, waxaana lagu wadaa inay maalmo kadib toos uga qeybqaataan dagaalada Soomaaliya ka socda ee u dhexeeya ciidamada Dowlada Soomaaliyeed iyo kuwa shisheeye oo dhinac ah iyo kuwa Xoogaag xarakatu shabaabu Mujaahidiin .
Taliyihii hore ee ciidaamadii la badalay Col.Brig. Paul Lokech ayaa Muqdisho soo gaaray sanadkii 2011 markii taliye kale isna lagu badalaxy xiligaasi,dadka reer muqdisho ayaa u arka is badbadalka ciidamada shisheeye inuu salka ku hayo mushaaraadka faraha badan ee ay qaataan sidaa daraadeedna ciidamadii dhowr bilood joogaba kuwo cusub lagu soo badalayo.